Horudhac: Manchester United vs Newcastle United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Old Trafford) – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Newcastle United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Old Trafford)
Haaruun February 21, 2021
(Manchester) 21 Feb 2021. Kooxda Manchester United ayaa isha ku haysa inay sii haysato rajadooda caatada ah ee hanashada horyaalka Premier League marka ay garoonkeeda Old Trafford ku soo dhaweynayaan Newcastle United caawa oo Axad ah.
Red Devils ayaa barbaro gashay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeeyay horyaalka, waxaana ay haatan 10 dhibcood ka dambeeyaan kooxda hoggaanka haysa ee Manchester City, halka Newcastle ay lix dhibcood ka sarreyso aagga loogu laabto heerka labaad.
Manchester United ayaa qiimeyn doonta taam ahaanshaha Edinson Cavani iyo Donnie van de Beek, kuwaasoo labadoodaba laga reebay safka Europa League khamiistii sababo la xiriira dhaawacyo muruqa ah.
Scott McTominay ayaa shaki laga galinayaa kulankan kaddib markii la bedelay kulankii Real Sociedad, halka Paul Pogba uu weli sii maqnaan doono.
Daafaca Newcastle United ee Federico Fernandez ayaa tababarka ku soo laabtay, waxaana laga yaabaa inuu ciyaaro kulanka ay la leeyihiin Wolves bilowga isbuuca soo socda.
Jeff Hendrick ayaa dib uga soo laabtay ganaax uu la maqnaa, laakiin Callum Wilson ayaa weli garoomada ka sii maqnaan doona.
>- Manchester United ayaa guuleysatay afar ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku wajahday Newcastle United, waxaana ku jira guulihii min 4-1 ahaa ee ay ka gaareen labadii kulan ee ugu dambeeyey.
>- Guushii kaliya ee ay gaareen Newcastle 37-dii kulan ee ugu dambeeyay tartammada oo dhan oo ay booqdeen garoonkooda Old Trafford waxa ay ahayd guushii 1-0 oo ay ku garaaceen horyaalka Premier League bishii December ee 2013.
>- The Magpies ayaa khasaaro la kulantay 10 kulan oo horyaalka Premier League ee ay wajaheen Man United, kaddib markii ay dhaliyeen goolka koowaad ee ciyaarta.
>- Manchester United ayaa badisay kaliya hal kulan shantii kulan ee ugu dambeeyay Premier League, si kastaba ha noqotee waxaa laga badiyay kaliya hal jeer 18 kulan oo horyaalka ah, waxaana ay haystaan 11 guul iyo 6 barbaro.
>- Man United ayaa soo kabasho ku heshay 22 dhibcood xilli ciyaareedkan, waana in 10 jeer ka babadan koox kasta oo kale.
>- Waxaa laga dhaliyay goolka furitaanka 11 kulan oo ay ciyaareen horyaalka xilli ciyaareedkan, laakiin way soo kabteen iyagoo badiyay todobo ka mid ah kulammadaas.
>- Dhammaan afarta guuldarro ee soo gaartay Man United xilli ciyaareedkan ayaa yimid iyadoo lagu ciyaarayo garoonka Old Trafford, waxaana gurigooda looga dhaliyay 18 gool, waana in hal ka badan goolashii guud ahaan looga dhaliyey xilli ciyaareedkii hore.
>- Bruno Fernandes ayaa dhaliyay 22 gool, wuxuuna dhigay 16 gool 38 kulan oo horyaalka Premier League ah, kaliya Lionel Messi iyo Robert Lewandowski ayaa si toos ah ugu lug yeeshay goolal ka badan Fernandes marka la eego shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub tan iyo markii uu xiddigan reer Portugal saftay kulankiisii ugu horreeyey Premier League.
>- Luke Shaw ayaa sameeyey shan caawin oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan afar ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Newcastle United ayaa khasaaro la kulantay sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League.
>- Waa laga badiyay saddexdii kulan ee horyaalka iyagoo aan wax gool ah dhalinin maqnaanshaha Callum Wilson, weeraryahankan ayaa dhaliyay 10 gool sidoo kalena caawiye ka ahaa 5 ka mid ah 25 gool oo ay dhalisay kooxda Newcastle.
>- The Magpies ayaa la kulantay sagaal guul darro 11 kulan oo ay marti ahaayeen, waxayna ku guuldareysteen inay shabaqa soo taabtaan siddeed ka mid ah kulamadaas.
>- Tababare Steve Bruce ayaa kaliya hal dhibic ka qaatay 11 kulan oo Premier League uu booqday garoonka Old Trafford, waana barbaraha 2-2 ee uu soo qaatay isagoo watay Sunderland bishii October 2009.
Horudhac: Arsenal vs Manchester City… (Wax ka ogow rikoorrada u gaarka ah kulankan caawa ka dhacaya garoonka Emirates)
Horudhac: Barcelona vs Cadiz... (Barca oo indhaha ku haysa inay galabta gaarto goosheedii siddeedaad oo xiriir ah horyaalka La Liga)